'अन्तिम फिल्मका समान दृश्य' भन्दै तीन अभिनेतालाई एक साथ श्रद्धाञ्जली ! :: Setopati
'अन्तिम फिल्मका समान दृश्य' भन्दै तीन अभिनेतालाई एक साथ श्रद्धाञ्जली !
एजेन्सी असार १
सानो पर्दाबाट करिअर सुरू गरेर बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतले छोटो समयमै फिल्मी क्षेत्रमा जबरजस्त प्रर्दशनी गरे। त्यसैले आइतबार मुम्बईस्थित अपार्टमेन्टमा उनले आत्महत्या गरेको खबरले पूरै देशमा धक्का परेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सुशान्त सिंहको ‘कार सिन’ भाइरल भएको छ। यो दृश्य सुशान्तको अन्तिम फिल्म ‘छिछोरे’ को हो। इरफानको अन्तिम फिल्म ‘अंग्रेजी मिडियम’ र हेथ लेजरको अन्तिम फिल्म ‘द डार्क नाइट’मा पनि यस्तै दृश्य थिएः कारको झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेको।
यी तीन अभिनेताको अल्पायूमै निधन र उनीहरूका अन्तिम फिल्मका काल्पनिक दृश्यमा देखिएका समानताले अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरैको ध्यान खिचेको छ। यो दुखद संयोगले शुभचिन्तकलाई झनै विक्षिप्त पारेको छ। अहिले धेरैले यी तीनै कलाकारलाई एकैसाथ श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन्।
‘द डार्क नाइट’मा हेथ लेजरको ‘जोकर’ पात्र निकै चर्चित बन्यो। उनको सन् २००८ मा अत्यधिक औषधि सेवनका कारण निधन भएको थियो। यसैगरी अभिनेता इरफान खानको बलिउड यात्रा भारतमा मात्र नभई देशबाहिर पनि अविस्मरणीय रह्यो। उनको यसै वर्ष क्यान्सरका कारण निधन भएको थियो।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सुशान्तसिंह केही समययता डिप्रेसनसँग लडिरहेका थिए। पछिल्लो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार डाक्टरहरुले उनको निधनको कारण आत्महत्या नै भएको पुष्टि गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १, २०७७, ०७:२८:००